Uhuru Kenyatta oo booqdey Somalia, dowlada Federaalka oo ka caroodey
" Joogitaankiina Somalia waxa ku badbaadiseen naf badan oo shacabka Kenya ah iyadoo aad dadkiina ka xoreyseen baqdinta Al Shabaab" ayuu yiri madaxweyne Kenyatta Isagoo ku labisan dharka ciidamada KDF.
Waxaa uu intaas ku darey " Waxaan dib u soo nooleysiiney dalxiiskii dalka lagu imaan jirey taas mahadeeda aad idinku leedihiin."
Saldhiga ciidamada dalka Kenya ee ku yaal Dhoobley ayaa ah taliska guud ee laga maamulo howlgalka Amisom ee KDF.
Madaxweynaha dalka Kenya oo uu la socday taliyaha ciidamada dalkaas ayaa la qadeeyey askarta KDF ee ku sugan saldhigaas isagoo dhageystey hadaladoda.
Dhinaca kale wararka laga helayo Ilo diblomaasiyeed ee ku sugan dalka Kenya ayaa sheegaya in dowlada Federaalka Somalia ka carootey booqashada Madaxweynaha dalka Kenya ku tagey Dhoobley.
​Kenya oo sheegatay dilka 140 katirsan Al Shabaab
Ciidanka Kenya oo lagu weeraray duleedka Afmadow
​Dagaal khasaaro gaystay oo ka dhacay gobolka Galgaduud
​IGAD oo walaac ka muujisay khatarta Al Shabaab